Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Tsiahivina momba ny sakafo vaovao: marika Salamar'i Charcuterie Fortin
Charcuterie L. Fortin Ltée. dia mampatsiahy ny marika Charcuterie Fortin Salami avy eny an-tsena satria mety misy varimbazaha izay tsy voalaza amin'ny marika. Ny olona manana allergy amin'ny varimbazaha na manana aretina celiac na aretina hafa mifandray amin'ny gluten dia tsy tokony handany ny vokatra tadidy voalaza etsy ambany.
Ny vokatra manaraka dia amidy ao Quebec.
Charcuterie Fortin salami 175 h 6 28555 04100 4 Tsara alohan'ny
Hamarino raha manana ny vokatra averina ao an-tranonao ianao. Ireo vokatra tadidy dia tokony hatsipy na haverina amin'ny magazay nividy azy ireo.
Raha manana allergy amin'ny varimbazaha ianao na manana aretina celiac na aretina hafa mifandraika amin'ny gluten, dia aza mihinana ilay vokatra tadidy satria mety hiteraka fihetsika matotra na mandrahona ny ainy izany.
• Hahafantatra bebe kokoa momba ny mahazaka sakafo mahazatra
Ity fampahatsiahivana ity dia nateraky ny orinasa. Ny Canadian Food Inspection Agency (CFIA) dia manao fanadihadiana momba ny fiarovana ara-tsakafo, izay mety hitarika amin'ny famerenana ny vokatra hafa. Raha tadidio ireo vokatra hafa mety hampidi-doza, dia hampandre ny besinimaro amin'ny alàlan'ny fampitandremana momba ny Food Recall Warnings ny CFIA.
Tsy nisy ny fanehoan-kevitra mifandraika amin'ny fihinanana ity vokatra ity.